Ọrịa Geese | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọrịa Geese
Ihe mere geese ji arịa ọrịa: ndepụta nke ọrịa na usoro nke ọgwụgwọ ha
Ọrịa Geese bụ nsogbu siri ike maka ndị ọrụ ugbo. Ọrịa dịgasị iche iche na-emetụta ọnụ ọgụgụ nke ndị geese n'ime ìgwè ehi ahụ, na-ebute ma ihe onwunwe ma ọ bụ ịgwọ ọrịa. Ndị oru ugbo mara ihe maara na ọ ka mma iji gbochie ọrịa karịa ịgbakọ ihe ọghọm n'ihi ya. N'iji tụnyere ulo ozuzu ndi ozo, geese bu ndi nwere ike ibute oria di iche iche.
Ọrịa ndị na-akpata ọrịa: ọrịa na-adịghị emerụ ahụ
Dị ka anụmanụ niile, anụ ọkụkọ nwekwara ike ibute ọrịa na nje. Ọrịa ndị na-ekesa ọrịa bụ otu n'ime nsogbu kachasị njọ nke onye ihu na ihu. Ha na-emetụta ọnọdụ ụmụ nnụnụ n'ụzọ dị njọ ma na-emetụta ọnụ ọgụgụ nke ìgwè ehi. Ebe ọ bụ na nnụnụ ndị a nwere ike ịdaba na nje, ọ dị mkpa ịma ụdị ọrịa ha na-eche ihu, ihe ịrịba ama ha na ụdị ọgwụgwọ ha ga-achọ.
Otú e si emeso afọ ọsịsa na geese
N'ọtụtụ ugbo ndi mmadu onwe ha na-amanye anu. Ọ dị mkpa ka ị mara na nnụnụ a nwere ike ibute ọrịa dị iche iche na nlekọta na-ekwesịghị ekwesị. Chee echiche banyere otu n'ime ọrịa a na-ahụkarị, nke chọrọ nlebara anya na onye ahụ, n'ihi na ọ bụ mgbe niile na-egosi na ọ bụ ọrịa siri ike. Gini mere ogbugbe anu ohia geese Geese, dika ihe o bula di ndu, choro nlebara anya na nlezi obi.